International Cricket - Part 213
आईसीसी विश्वकप : न्यूजिल्याण्डले दियाे भारतलाई ‍‍‍२४० रनकाे लक्ष्य
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा न्यूजिल्याण्डले भारतलाई २४० रनको लक्ष्य दिएको छ । निर्धारित ओभरमा न्यूजिल्याण्डले ८ विकेट गुमाएर २३९ रन बनायाे । वर्षाका कारण मंगलबारको स्थगित हुँदा ४६.१ ओभरमा न्यूजिल्याण्डले ५ विकेटको नोक्सानीमा…
१२ वर्षे क्रिकेट करियरमै छक्का प्रहार गरेनन्
टी–२० क्रिकेटको सुरुआत भएदेखि चौका र छक्का लगाउन ब्याट्सम्यानको होडवाजी नै गर्छन् । आधुनिक क्रिकेटमा तिब्र गतिमा रन बनाउनको लागि चौका र छक्काको निकै महत्व रहन्छ । वर्तमान समयमा बलरले फालेका बलहरु सजिलै साथ बाउन्ड्रि बाहिर पु¥याउन सक्ने…
आईसीसी विश्वकप सेमिफाइनल : आज पनि पानी परे भारत र न्यूजिल्याण्ड कसलाई फाइदा?
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको १२ औं संस्करणको पहिलो सेमिफाइनल खेल बर्षाका कारण प्रभावित भयो । मंगलबार टस जितेर न्यूजिल्याण्डले पहिला ब्याटिङ रोजेको थियो । ४६.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २११ रन बनाएका बेला वर्षा भएपछि खेल रोकिन पुग्यो । वर्षा भएपछि…
विश्वकप क्रिकेट : भारत र न्युजिल्यान्डको वर्षाले स्थगित बाँकी खेल आज
नेप्लेज, २४ असार । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवशीय विश्वकप अन्तर्गत भारत र न्युजिल्याण्डबीचको पहिलो सेमिफाइनलमा वर्षा बाधक बनेपछि स्थगित गरिएको छ । बाँकी खेल आज हुनेछ । म्यान्चेस्टरस्थित ओल्ड ट्रफोट मैदानमा टस जितेको न्युजिल्याण्डले…
भारत र न्युजिल्यान्डको खेल वर्षाले स्थगित, बाँकी खेल भोलि हुने
नेप्लेज, २४ असार । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवशीय विश्वकप अन्तर्गत भारत र न्युजिल्याण्डबीचको पहिलो सेमिफाइनलमा वर्षा बाधक बनेपछि स्थगित गरिएको छ । बाँकी खेल भोलि हुनेछ । म्यान्चेस्टरस्थित ओल्ड ट्रफोट मैदानमा टस जितेको…
पाकिस्तानी क्रिकेटरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता!
काठमाडौं, २४ असार । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको समूह चरणबाट पाकिस्तान बाहिरिएर घर फर्किसकेको छ । तर पाकिस्तानी समर्थकहरुले विश्वकपमा टिमको प्रदर्शनलाई लिएर अझै आलोचना गर्न भने छाडेका छैनन् । खासगरि उनीहरुको निशानामा अलराउण्डर शोयब मलिक परेका…
Previous 1 … 211 212 213 214 215 … 363 Next